ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ ကိုယျခငျြးစာပါ ကိုယျခံစားရတာမဟုတိုငျးစကားတဈခှနျးကို လှယျလှယျလေးမပွောလိုကျပါနဲ့ - Tameelay
February 9, 2020 Tameelay Tameelay Knowledge 0
ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ ကိုယျခငျြးစာပါ ကိုယျခံစားရတာမဟုတိုငျးစကားတဈခှနျးကို လှယျလှယျလေးမပွောလိုကျပါနဲ့ ရငျဘတျကွီးနဲ့ ကိုယျ့မှာ အစစအရာရာကို ရငျးထားခဲ့တာလေ ဘာမဟုတျတာလေးကအစ
သလေောာကျအောငျနာကငျြနခေငျြ နကေငျြနတောလေ စကားလေးတဈခှနျးပွောဖို့ လှယျလှယျလေးပါပဲ စက်ကနျ့အနညျးငယျလောကျအတှငျးမှာ လူတဈယောကျ မိုးပြံခငျြစိတျပေါကျသှားတဲ့အထိ ပွောလိုကျလို့ရသလို သခေငျြစိတျပေါကျသှားတဲ့အထိ ပွောလိုကျလို့လဲ ဖွဈတယျလေ
ကိုယျခငျြးစာပါ ဒါမှမဟုတျ စာနာပေးပါ . . . မှေးဖှားလာရပုံခငျြးမတူတဲ့အခါ ဘဝတှဟောလဲ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမတူကွဘူးလေ အရာရာကို ကိုယျ့ဘဝနဲ့ယှဉျပွီး နှိုငျးယှဉျလိုကျဖို့ လှယျပမေယျ့ အနှိုငျးယှဉျခံလိုကျတဲ့ တခွားတဈဖကျမှာ ဘယျလောကျသိမျငယျသှားလိမျ့မလဲ စာနာပါ
ကိုယျကွိုးစားရငျ ကွိုးစားသလို ဖွဈတယျဆိုပမေယျ့ တဈခါတဈရံမှာ အသအေလဲ ကွိုးစားနပေမေယျ့ ဖွဈမလာတတျတာတှလေဲ လောကမှာ အမြားကွီးပါ မဖွဈလာတိုငျး မကွိုးစားဘူးလို့ထငျနတေဲ့ အတှေးတှထေကျ ဘာကွောငျ့ဆိုတဲ့ အကွောငျးလေးကို ကိုယျခငျြးစာတရားလေးနဲ့ဖွဈဖွဈ မွငျအောငျကွညျ့ပေးပါ
ဘာမဟုတျတာလေးနဲ့ ဒီလောကျ ဖွဈနဖေို့လိုလို့လား တဲ့ တိုကျတနျးနဈဆိုတဲ့ သင်ျဘောကွီးနဈသှားတာ ဘာမဟုတျတဲ့ ရခေဲတောငျလေးတဈခုကို တိုကျသှားလို့ နဈသှားတာပါ ကြှနျမက အမြားကွီး မြှျောလငျ့ထားမိတဲ့လူလေ နဲနဲဖွဈဖွဈ အမြားကွီး ထိခိုကျခံစားရစပေါတယျ
ဖုနျးမအားတာပဲ ဖွဈဖွဈ အခြိနျမပေးတဲ့အခါပဲ ဖွဈဖွဈ ကြှနျမမှာ အတှေးပေါငျး မွောကျမြားစှာနဲ့ ဒေါသထှကျမလား စိတျပူရမလားဆိုတဲ့ ဒှိဟတှေ အမြားကွီးဖွဈစနေဲ့ ဒီ ဘာမဟုတျတာလေးတှကေိုကအစ ဂရုစိုကျပါတယျ ။
ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ ကိုယျခငျြးစာပါ ဒါမှမဟုတျ စာနာပေးပါ ဂဲမှနျခဲ့ဖူးတဲ့ စာသူငယျက ဂဲကို ကွောကျတယျ ရနှေေးပူ လောငျခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးတဈယောကျက ရနှေေးကိုကွောကျတာလဲ သဘာဝပါပဲ
လူတိုငျးမှာ ဖွတျသနျးခဲ့ရတဲ့အတိတျဆိုတာရှိသလို အဲ့ဒီအတိတျမှာလဲ မတူညီတဲ့ ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှေ ကိုယျစီရှိပါတယျ အဲ့အတှကျ ကွောကျသငျ့တာလားမကွောကျသငျ့တာလား တုနျလှုပျသငျ့တာလား မတုနျလှုပျသငျ့ဘူးလားဆိုတာထကျ ကိုယျ စိုးထိတျတဲ့အရာကို ဆကျပွီး စိုးထိတျနဦေးမှာပဲလေ
အတိတျဆိုတာ ဖြောကျပဈရခကျသလို စိတျထဲ စှဲသှားရငျ စှဲသလောကျ ပိုပွီးကွောကျတတျလာတယျ ဒါ ဖွဈလဖွေ့ဈထ ရှိတဲ့ အရာပါ
အတိတျမှာ ဘာမှ မဖွဈနိုငျပါဘူးလဆေိုပွီး ယုံကွညျကွညျနခေဲ့ပွီးမှ တဈယောကျတညျးကနျြရဈခဲ့တဲ့လူက ဆကျပွီး မယုံကွညျရဲတော့တာဟာ ပုံကွီးခြဲ့တာမဟုတျဘူးနောကျထပျ ထပျပွီး မဖွဈအောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားတာပါ
ဘာမဟုတျတာလေးနဲ့ ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျမှာ အနာပျေါ ဒုတျကသြှားတဲ့ အဖွဈတှေ အနာပျေါ ဆားထပျဖွူးခံရတဲ့အဖွဈတှေ ရှိတဲ့အကွောငျး ပွောပွခငျြတယျ လူတိုငျးမှာ ဒဏျရာကိုယျစီရှိတတျကွပါတယျ မတူညီတဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှပေေါ့
အဲ့တာကွောငျ့ စကားတခှနျးကို မပွောခငျမှာ ဒါမှမဟုတျ လုပျရပျတဈခုကို မလုပျခငျမှာ အရငျဆုံး စာနာကွညျ့ပေးပါ ဒါမှမဟုတျ ကိုယျခငျြးစာပါ ။
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါ ကိုယ်ခံစားရတာမဟုတိုင်းစကားတစ်ခွန်းကို လွယ်လွယ်လေးမပြောလိုက်ပါနဲ့ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ကိုယ့်မှာ အစစအရာရာကို ရင်းထားခဲ့တာလေ ဘာမဟုတ်တာလေးကအစ
သေလောာက်အောင်နာကျင်နေချင် နေကျင်နေတာလေ စကားလေးတစ်ခွန်းပြောဖို့ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်အတွင်းမှာ လူတစ်ယောက် မိုးပျံချင်စိတ်ပေါက်သွားတဲ့အထိ ပြောလိုက်လို့ရသလို သေချင်စိတ်ပေါက်သွားတဲ့အထိ ပြောလိုက်လို့လဲ ဖြစ်တယ်လေ
ကိုယ်ချင်းစာပါ ဒါမှမဟုတ် စာနာပေးပါ . . . မွေးဖွားလာရပုံချင်းမတူတဲ့အခါ ဘ၀တွေဟာလဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြဘူးလေ အရာရာကို ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ယှဉ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်လိုက်ဖို့ လွယ်ပေမယ့် အနှိုင်းယှဉ်ခံလိုက်တဲ့ တခြားတစ်ဖက်မှာ ဘယ်လောက်သိမ်ငယ်သွားလိမ့်မလဲ စာနာပါ
ကိုယ်ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလို ဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ အသေအလဲ ကြိုးစားနေပေမယ့် ဖြစ်မလာတတ်တာတွေလဲ လောကမှာ အများကြီးပါ မဖြစ်လာတိုင်း မကြိုးစားဘူးလို့ထင်နေတဲ့ အတွေးတွေထက် ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါ
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ဒီလောက် ဖြစ်နေဖို့လိုလို့လား တဲ့ တိုက်တန်းနစ်ဆိုတဲ့ သင်္ဘောကြီးနစ်သွားတာ ဘာမဟုတ်တဲ့ ရေခဲတောင်လေးတစ်ခုကို တိုက်သွားလို့ နစ်သွားတာပါ ကျွန်မက အများကြီး မျှော်လင့်ထားမိတဲ့လူလေ နဲနဲဖြစ်ဖြစ် အများကြီး ထိခိုက်ခံစားရစေပါတယ်
ဖုန်းမအားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်မပေးတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မမှာ အတွေးပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ ဒေါသထွက်မလား စိတ်ပူရမလားဆိုတဲ့ ဒွိဟတွေ အများကြီးဖြစ်စေနဲ့ ဒီ ဘာမဟုတ်တာလေးတွေကိုကအစ ဂရုစိုက်ပါတယ် ။
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါ ဒါမှမဟုတ် စာနာပေးပါ ဂဲမှန်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာသူငယ်က ဂဲကို ကြောက်တယ် ရေနွေးပူ လောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ရေနွေးကိုကြောက်တာလဲ သဘာဝပါပဲ
လူတိုင်းမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ဆိုတာရှိသလို အဲ့ဒီအတိတ်မှာလဲ မတူညီတဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေ ကိုယ်စီရှိပါတယ် အဲ့အတွက် ကြောက်သင့်တာလားမကြောက်သင့်တာလား တုန်လှုပ်သင့်တာလား မတုန်လှုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတာထက် ​ကိုယ် စိုးထိတ်တဲ့အရာကို ဆက်ပြီး စိုးထိတ်နေဦးမှာပဲလေ
အတိတ်ဆိုတာ ဖျောက်ပစ်ရခက်သလို စိတ်ထဲ စွဲသွားရင် စွဲသလောက် ပိုပြီးကြောက်တတ်လာတယ် ဒါ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတဲ့ အရာပါ
အတိတ်မှာ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီး ယုံကြည်ကြည်နေခဲ့ပြီးမှ တစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့လူက ဆက်ပြီး မယုံကြည်ရဲတော့တာဟာ ပုံကြီးချဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် ထပ်ပြီး မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပါ
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အနာပေါ် ဒုတ်ကျသွားတဲ့ အဖြစ်တွေ အနာပေါ် ဆားထပ်ဖြူးခံရတဲ့အဖြစ်တွေ ရှိတဲ့အကြောင်း ပြောပြချင်တယ် လူတိုင်းမှာ ဒဏ်ရာကိုယ်စီရှိတတ်ကြပါတယ် မတူညီတဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပေါ့
အဲ့တာကြောင့် စကားတခွန်းကို မပြောခင်မှာ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ရပ်တစ်ခုကို မလုပ်ခင်မှာ အရင်ဆုံး စာနာကြည့်ပေးပါ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ချင်းစာပါ ။